* Light Of Myanmar *: October 2007
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို မြင်ရတော့ အတော်လေးကို နားမလည် ဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလို အချိန်မှာ လေထဲ တိုက်ဆောက်တဲ့သူက ဆောက်၊ ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်ကို ဆဲသူကဆဲ အဓိပါယ်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံနေပါတယ်။ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ မဆွေးနွေးကျဘူး။ မစဉ်းစားကျပါဘူး။ သင်ခန်းစားလဲ မယူတတ်ကျဘူး။ ဘယ်လောက်စိတ်ကူး ယဉ်လဲ ပြောပြပါမယ်။ နအဖ ထဲမှာ တပ်တွင်း အကွဲအပြဲ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားတော့ ပျော်ရွှင်တဲ့ သူတွေက မနည်းလှပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးပါ။ တပ်တွင်းကွဲပြဲတာနဲ့ ဦးသန်းရွှေ ပြုတ်သွားမယ်ဆိုတာ သေချာလို့လား? ဦးသန်းရွှေက နှိမ်နင်းအောင်မြင်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? ဒါဆိုရင် နောက် နှစ် ၂၀ ကြာမှ ပေါ်လာမယ့် လူထု လှုပ်ရှားမှုကို ထပ်စောင့်ဦးမှာလား ? လက်နက်ကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ သူတွေကလဲ မနည်းလှဘူးဗျ။ ABSDF မအောင်မြင်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို မေ့ထားပုံရတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ အခုချက်ချင်း သေနတ်ဝယ်ပြီး စစ်တပ်ကို သွားတိုက်ဖို့ ဖြစ်နိုင် ပါ့မလား? ဦးသန်းရွှေကို လုပ်ကြံဖို့လည်း တွေးတဲ့ သူက မနည်းဘူး။
ပထမဆုံး ကျနော် နဲ့ အစ်ကိုမောင်ဆန် မနေ့က စဉ်းစားမိတဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ စစ်တပ်ဟာ ခိုင်းသလို မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တခု သတိထားမိလို့ပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၀င်စီးတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာခြား တိုင်းရင်းသားစစ်သားတွေကို အသုံးပြုသွားတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ပစ်ခတ်ရာမှာလည်း တိုင်းရင်းသား စစ်သားတွေကို အသုံးပြုတယ်လို့လဲ ပြောသံကြားပါတယ်။ (တိုင်းရင်းသားတွေကို အထင်မလွဲစေချင်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ်တိုင် အခုလို လုပ်ရပ်ကို မထောက်ခံဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်) တကယ်လို့သာ စစ်သားတွေဟာ အမိန့်ပေးတိုင်း လုပ်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား စစ်သားလေးတွေကို သုံးစရာ အကြောင်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ တချို့လည်း ဆေးကျွေးထားတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်သားတွေဟာ သတင်းတွေ ဆိုက်ဝါး လုပ်သလောက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါတယ်။
သံဃာတွေ နဲ့ ပြည်သူတွေ သေကြေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ စစ်တပ်အတွင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို တွေဝေမှုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခု သွေးပူနေတဲ့ချိန်မှာ နောက်ထပ် လူထု အုံကြွမှုဖန်တီးလို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အောင်မြင်ဖို့ အရမ်းကို အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာရင် နအဖ အနေနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ အလျော့ပေးမှုတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူတွေကို သနားလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် အသက် အန္တရယ်ကို စိုးရိမ်လို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီမှာ မေးခွန်းလေးတွေ အများကြီးမေးထားပါတယ်။ မေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာ တနေ့မှာ နအဖ ပြုတ်ကျသွားမယ်လို့ အိပ်မက်တွေ မက်နေကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖ ပြုတ်ကြသွားစေမယ့် အကြောင်းတရား ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိသလားဆိုတော့ . . . မရှိဘူးဗျ။ အဲဒါတွေကို သတိထားမိစေချင်လို့ မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ လူထုအုံကြွမှု အခုချိန်မှာ ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အပြောင်းအလဲကို အရမ်းမျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်လေးလဲဖြစ်နေပါတယ်။
လူတွေကတော့ သတင်းတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေပါတယ်။ သတင်း နားမထောင်နဲ့လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုဖြစ်နေတာ သတင်းနားထောင်ပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ ၀မ်းတွေနည်း တစ်ရက် ကုန်သွားပါတယ်။ နောက်နေ့ ရောက်တော့လည်း သတင်းတွေ နားထောင် ဒေါသတွေထွက်၊ ၀မ်းတွေနည်းတာတွေ ဖြစ်ကျပြန်ရော ! ! ! ! ! ဒီလိုပဲလုပ်နေရင် မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ကျနော်တို့တတွေ ညီညီညွှတ်ညွတ်နဲ့ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ။ လူတိုင်း မိမိ တတ်စွမ်း တရွေ့ နည်းနည်းစီ လုပ်ကိုင်သွားရင် အောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။
တကယ်လို့ လူထုအုံကြွမှုကို စိတ်ဝင်စားရင် သတိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ စုစည်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်
(၁) ပြည်သူတွေ လုပ်ရဲလား?
လူတွေကို အရင်တုံးက လို သေနတ်တွေ ရှေ့မှာပဲ ဆက်လက်ဆန္ဒပြအောင် လုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု မလဲ?
(၂) ပြည်သူတွေအများစု လုပ်နိုင်လား ?
ပြည်သူတွေဟာ ဥာဏ်ရည်နိမ့်သူ မြင့်သူ အမျိုးအမျိုး ရှိနိုင်သလို၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ တွေလည်း ကွဲပြားနေပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိ အလုပ်တွေကို မသွားဖို့ သပိတ်မှောက်ဖို့ တိုက်တွန်းချက်မျိုး ဆိုရင် လူတော်တော် များများအတွက် အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ အလုပ်ထုတ်ခံရရင် ဘ၀ ပျက်သွားမှာကို တချက် စာနာသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
(၃) ပြည်သူဦးရေ ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်လဲ?
နအဖပြုတ်ကျဖို့က လူလေးတစ်သောင်း နှစ်သောင်း လောက်နဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။
အချိန်ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ နအဖ ပြုတ်ကျအောင် ရေရှည် တိုက်ပွဲ ၀င်ရမယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ တစ်လပဲ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် နအဖကို ဘာမှ ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၉၈၈ တုံးက မှားတဲ့ အမှားကို သင်ခန်းစာ ပြန်ယူကျပါ။ ဥပမာပြောရရင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလမ်းစဉ်မျိုးပြန်သွားဖို့ စိတ်ကူးရင် မှားနိုင်ပါတယ်။
လုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းဟာ နအဖ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ အထိ ရည်ရွယ်ချက်ထားနိုင်ရပါမယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ပါ။
(၇) ငွေကုန်ကြေးကျ ရှိမလား?
လူတိုင်း ငွေကြေး အကုန်အကျခံပြီး လုပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ဘူးဗျ။ နောက်ပြီး ၀င်ငွေ ထိခိုက်ခံပြီး လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲ မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားဖို့ပါ
(၈) ရေရှည်လုပ်နိုင်မလား ?
တစ်လလောက်နဲ့ နအဖ ပြုတ်ကျဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အားလုံးကို နေပြည်တော်က နေ ထိမ်းချုပ်ထားတာ မို့ပါ။ ရန်ကုန်ဟာ စီးပွားရေး မြုိ့တော် အနေနဲ့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကောက်ရိုးမီးလို လုပ်လို့ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့လူတွေက ကျနော်တို့ဟာ မေးခွန်းတွေပဲ မေးပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ အဖြေမရှိဘူးတဲ့။ ကျနော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြနည်းမှာ အဖြေတွေပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဥာဏ်မှီသလောက် ကြိုးစားပြီးရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ကျနော်တို့ကို နအဖလူတွေလို့ အတင်းစွပ်စွဲပြီး ဒီအစီအစဉ် မထမြောက်အောင် ကြိုးစားနေသလား လို့ သံသယဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ နအဖကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်သလို ဒီမိုကရေစီနဲ့ လုပ်စားနေသူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နအဖလူတွေ ဘာကြောင့် ဖျက်လဲ ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားသူတွေ ဖျက်တယ်ဆိုတာ လူတွေက ယုံချင်မှ ယုံမှာပါ။ ယုံပါ။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လုပ်စားသူတွေ မျှောင်လင့်ထားတာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူတို့ တကယ် မျှော်နေတာ ငွေဆိုတာသတိပြုစေချင် ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ နအဖ ပြစ်သတ်တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ လောက်ပဲ သူတို့ လိုချင်နေတာပါ။ ဒီသတင်းတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေပြပြီး NGO တွေနဲ့ အဖြူ အစိုးရတွေစီမှာ ငွေတောင်း လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ နအဖ ပြုတ်ကျပြီး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီသာ ရသွားရင် အဲဒီလူတွေ အခုရနေတဲ့ ငွေတွေ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေ ပဲ ရကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားသူတွေကို သတိပြုပါလို့ ပြောထားချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 10:11 PM5comments Links to this post
ဦးဏှောက်မရှိဘူးလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နအဖ ကတော့ မြို့တော်ကို နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ကို လူနေထူထပ်တဲ့ စီးပွားရေး မြိုတွေနဲ့ သီးသန့် ခွဲထားလိုက်ပါတယ်။ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး သူ့အဏာ တည်မြဲရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ ပါတယ်။ လူထု ဆန္ဒပြပွဲအတုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကိုလည်း အရုပ်ကလေး ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကတော့ နအဖရဲ့ ၁၉၈၈ နဲ့ မတူတဲ့ ခြေလှမ်း အသစ်လေးတွေပါ။
တဖက်က ဘယ်လို နည်းဗျူဟာ အသစ်တွေ တီထွင်မလဲ? ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ နအဖတောင် ဆန်းသစ် ထားတာလေးတွေ ရှိရင် တဖက်ကလည်း . . . . . . . . စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ အဆင့်ကနေ . . . . . . ? ? ? ? ? ? ? ?
Posted by * In Search of Truth * at 2:48 PM4comments Links to this post
လူတိုင်းနီးပါး ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဝါဒစွဲ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲ ဖို့ပဲ လိုလားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နအဖ ဆင်းသင့်ပြီ ဆိုတာတော့ သဘောတူ ပါတယ်။ ဒီတော့ နအဖဆင်းသင့်ပြီလို့ ယူဆနေတဲ့သူတွေကို မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ပါမယ်။ ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး
(၁) သတင်းထူးတွေ ထွက်မထွက် လိုက်လံ နားထောင်နေတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ သတင်းထူးလေးတွေ ထွက်လာအောင် (၀ါ) ဆန္ဒပြပွဲလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ကူညီဖို့ စဉ်းစားထားလဲ?
(၂) ကုလသမဂ္ဂကို မျှော်ကိုးတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး ဘာမှ အားကိုးလို့မရတာ လက်တွေ့ပဲ။ တကယ်လို့ အခုလည်း အားကိုးလို့ မရရင် ဘာတွေ ဆက်လုပ်သင့်တယ် တွေးထားလဲ?
(၃) စစ်တပ် ပစ်တဲ့ကိစ္စန့ပတ်သက်ပြီး နေ့တိုင်း ဆဲနေပါတယ်။ နောင်မှာ စစ်တပ် ဆန္ဒပြသူတွေကို မပစ်အောင် (၀ါ) အပစ်မခံရအောင် ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးပြီလား?
(၄) နိုင်ငံတကာ တပ်တွေကို မျှော်လင့်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာရင် ဘာလုပ်မလဲ စဉ်းစားပြီးပြီလား?
(၅) ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ နအဖ ပစ်တာတွေကို မှတ်တမ်း တင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ အဲဒီမှတ်တမ်းတွေက နအဖပြုတ်ကျ သွားအောင် အသုံးမ၀င်ရင် ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ?
(၆) လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေ အရှိန်လုံးဝ ကျနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သွေးပူဆဲပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ တွေးထားလဲ?
အဲဒီမေးခွန်းလေးတွေ ဖြေကြည့် ပါလားခင်ဗျာ. . . . . အချင်းချင်းလဲ ပြန်မေးကြည့်ပါ
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကျပါစေ
Posted by * In Search of Truth * at 5:08 PM3comments Links to this post
ဆန္ဒပြပွဲအောင်မြင်ဖို့ အလားအလာရှိ ပါသလား?
နအဖအနေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ထိမ်းသိမ်းလာ နိုင်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီပုံအတိုင်း ဆက်သွားနေရင် ဆန္ဒပြပွဲ ကျဆုံးပါတော့မည်။
နိုင်ငံတကာ စစ်တပ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီကို မျှော်လင့်လို့ မရဘူးလား?
လက်တွေ့ကျကျ တွေးကြ ရအောင်ပါ။ အခုအချိန်မှာ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့တော့။ ကုလသမဂ္ဂအပိုင်းကို ကြည့်ရင် စစ်တပ်နဲ့ ၀င်ရောက်ပီး နအဖကို ဖြုတ်ချခွင့် မရှိပါဘူး။ ဖြုတ်ချဖို့လဲ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင် တပ်အင်အား မရှိပါဘူး။ အများဆုံး လုပ်နိုင်တာ စီးပွားရေးနဲ့ စစ်လက်နက် တင်ပို့မှု ပိတ်ဆို့တဲ့အထိပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နအဖအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ထိမ်းဖို့ သေနတ်နဲ့ ကျည်ဆံရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။ တင့်ကားတွေ၊ တိုက်လေယဉ်ပျံတွေ မလိုပါဘူး။ စီပွားရေးပိတ်ဆို့ရင် ပြည်သူတွေပဲ ခံစားရမှာပါ။ ဒါလဲ လက်တွေ့ မြင်တွေ့ နေရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကို ကြည့်ရင် အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံတွေက စစ်တပ်တွေ လာနိုင်လား တွေးဖို့ ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ သူတို့နိုင်ငံအတွက် အကျိုးမရှိရင် သူတို့ရဲ့ စစ်သားတွေ အသေခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိလဲ အီရတ်နဲ့၊ အာဖဂန်မှာ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ များနေပါပြီ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
တရုပ်ကြီးက ဦးသန်းရွေဆင်းပေးဖို့ ဖိအားပေးရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
ဦးသန်းရွှေနေရာကနေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တရုပ်က အတင်းခိုင်းလို့ ကြောက်ပီး ဆင်းပါ့မလား?
ပြီးတော့ သူ့ကို သတ်ဖို့ ကျိန်းနေတဲ့ သူတွေ လက်ထဲ အဲလောက် အာဏာ လွယ်လွယ်ကူကူ ထည့်ပါ့မလား? ဘယ်သူမဆို ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ အပြစ်တွေ လုပ်ထားပါစေ . . . ကိုယ့် မိသားစုကို သတ်ချင်နေတဲ့ လူတွေလက်ထဲ အာဏာပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါရှင်းရှင်းလေးပါ။ တရုပ်က နအဖကို မကူညီတော့ဘူးလို့ လုပ်ရင်လည်း ဦးရှုမောင်လို တံခါးပိတ်နေမှာပါ။ ဒါလဲ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခ ရောက်မယ့်အရေးပါ။
လက်ရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ စုပေါင်းပြီး စစ်တပ်ကို ပြန်တိုက်ရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ?
ပထမ အဲဒီ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကရော ဘာတွေ ကောင်းနေလို့လဲ အရင် စဉ်းစားပါ? ရှေ့ဘုန်းကြီး တချက်ခေါက် နောက် ဘုန်းကြီး နှစ်ချက်ခေါက် မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့လဲ အဆင်ပြေသလို သတ်ဖြတ်နေတာပဲ။ လက်တွေ့ကျကျ ပြောရရင် သူတို့ အဖွဲ့တွေ ကိုယ်တိုင် စုစည်းဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ တပ်ပေါင်းစု အကြီးအကဲ နေရာ လုနေတာနဲ့ရင် နအဖ ကိုတိုက်တဲ့ဆီကိုရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပီး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်နေတဲ့ ၄ သိန်းကျော်ရှိတဲ့ စစ်တပ်ကို တိုက်ရင် အောင်မြင်ဖို့ အရမ်းကို နည်းပါတယ်။ အခု ပြည်သူတွေက စစ်သားတွေကိုပဲ ကြောက်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စစ်သားရော၊ သူပုံရော အားလုံးကို ကြောက်နေရ မှာပါ။ အဆင်မပြေ ပါဘူးခင်ဗျာ
တပ်တွင်းပုံကန်မှ ဖြစ်နိုင်လား ?
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် လေ့လာချက်အရ တပ်တွင်း ပုန်ကန်မှုဖြစ်ဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ သိထားတာလေး မျှဝေချင်ပါတယ်။
(၁) စစ်တိုင်းတွေထဲမှာ တပ်မတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တိုင်းမှုး တစ်ယောက်က ပုန်ကန်ရင် အဲဒီစစ်တိုင်း အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ တပ်မမှုးတွေရဲ့ တပ်သားတွေက ပြန်တိုက် နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပေါ့နော် - ရန်ကုန်တိုင်းမှုးက ပုန်ကန်ရင် ရန်ကုန်ထဲမှာ ရှိတဲ့ တပ်မ၂၂၊ ၃၃၊ ၇၇ တွေက ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနကို ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ
(၂) စစ်တိုင်းမှုးတွေ၊ တပ်မတွေဟာ Mobilization လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စစ်သားဦးရေထက်ပိုပြီး တပ်ကနေထွက်မယ်ဆိုရင် အထက်ကနေ ခွင့်ပြုချက် တောင်းရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်တွင်းပုန်ကန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ (ဟီးဟီး :D ရုရှက စစ်သားတွေလို့ ထင်ခံရဦးမယ်။ အဲဒါ ဗိုလ်မှုးဟောင်း တစ်ယောက် ပြောပြချက်ကို ဖေါက်သည်ချတာပါ)
အခု သတင်းဓါတ်ပုံတွေ ကမ္ဘာက သိသွားပီပဲ အဆင်ပြေမှာပါ ?
သတင်းဓါတ်ပုံတွေ အပြင်ရောက်တော့ သတင်းဌာနတွေ အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ သတင်းကို လူကြည့် ပိုများတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ ဒီသတင်းတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နအဖ ဆင်းသွားတဲ့အထိ တော့ စိတ်မကူးပါနဲ့။ လက်တွေ့ကျကျ မြင်တတ်ပါ ခင်ဗျာ။ ပြည်သူတွေ အတွက်တော့ စီးပွားရေး အခုထက်ပိုပီး ပိတ်ဆို့ရင် မိအေး နှစ်ခါနာဖြစ်တဲ့ ဘ၀ရောက်သွားမှာပါ။
ပုလင်းဗုံန်းနဲ့ အကြမ်းဖက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ? နအဖ ပြုတ်ကျဖို့လား? စစ်သားတွေ သတ်ဖို့လား? စစ်သားဆိုတာ သူ့အလုပ် သူလုပ်ရမှာပဲ။ ပုလင်းဗုံန်းနဲ့ စစ်သားတွေကို သွားသတ်ရင် လက်ရှိ ပြည်သူတွေဘက် ပါချင်နေတဲ့ စစ်သားတွေက ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အမြင်ပြောင်းပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ ပုလင်းဗုံန်းနဲ့ တိုင်းပြည်အာဏာ သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓက ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဟီးဟီး . . . .ပြောလို့သာ ပြောနေတာ ကုန်ဈေးနှုံန်းတွေ ဒီလောက်တက်နေတာ ပုလင်းဗုန်းတွေလုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံတောင် ရှိပါ့မလား?
စည်းလုံးရင် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူးလား? အခုပြောပုံက နအဖပဲ အာဏာ ဆက်ယူ ဆန္ဒပြပွဲ မအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား?
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ စည်းလုံးနေလို့လည်း မလုံလောက်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ စည်းရုံးနေပါစေ . . 1988 တုံးက အတိုင်း လုပ်ဖို့ စိတ်မကူးပါနဲ့။ နအဖအနေနဲ့ 1988 မှာ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်း ရပီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းဟောင်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ စည်းရုံးနေပါစေ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းသစ်ကို စဉ်းစားရပါမယ်။ အဲဒီနည်းသစ်ဟာ
(၁) လူထုအများစု လုပ်နိုင်တာ / လုပ်ရဲတာ ဖြစ်ရပါမယ်
(၂) လုပ်ရတာ လွယ်ကူရပါမယ်
(၃) နအဖ ပြုတ်ကျသွားစေ ရပါမယ်။
အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ နည်းသစ်လေးကို ကျနော်တို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒီနည်းသစ်ကလဲ လတ်တလောပဲ သုံးလို့ရမှာမို့ သွေးအေးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှ အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အခုနည်းသစ်ကို မိမိအသိတွေဆီ အီးမေးလ်ပို့ပြောပါ။ ဖိုရမ်တွေမှာ တင်ပြပါ။ ၀က်ဆိုက်တွေကို သတင်းပေးပါ။ ရေဒီယိုတွေကို သတင်းပေးပါ။ မြန်မြန်လုပ်ပါ။ မြန်မြန် မလုပ်ရင် ကျဆုံးပီဆိုတာ သတိပြုပါ။ အချိန်သိပ်မရှိပါဘူး။
Posted by * In Search of Truth * at 3:14 AM3comments Links to this post